QORMO:-Xasuustaydi Halyeey Maxamuud Xasan Cilmi W/Q. Ibraahim Aadan Shire | Saadaal Media
QORMO:-Xasuustaydi Halyeey Maxamuud Xasan Cilmi W/Q. Ibraahim Aadan Shire
Allaha u raxmadee Maxamuud waxaa uu ku dhashay miyiga dagmada Ceelcadee qiyaasti 1982-di halkaas ayuuna ku noolaa ilaa uu kasoo hana qaaday. 1994-ti ayuu magaalo soo galay asagoo kuray xoogla ah wuxuuna ka billaabay dagmada Garabahaareey oo uu muddo kooban joogay halkaas ayaana isku baranay oo xariirkeenu ku bilowday oo aan noqonay saaxiib dhow ka sakow inaan ahayn awlaadda labo aabo wada dhalay. ka dib wuxuu u gudbay Baladxaawo oo ka billaabay waxbarashada aasaasiga ah Qur’aankana dib ugu naqtiimay. 1996-di ayuu u kicitimay Kenya oo u dhaxeeyay Siyeelooy iyo Nayroobi oo uu ku sugnaa ilaa bishii lixaad sanadki 1999-ki markaas oo u dhoofay Maraykanka isagoon Af-soomaali mooyee luuqad kale ku hadal, iskoolna oogu danbaysay kii Baladxaawo. Maraykanka ayuu daganaa ilaa uu dalkiisi dib ugu soo laabtay si uu qayb ooga noqdo dib u dhiska dalka sanadki 2009-ki.
Sanadki 2005-ti ayaan subax furay internetka, mareegti ugu horraysay ee aan furay ayaa ciwaankeedi koowaad waxaa kasoo muuqday Maxamuud oo meel fagaaro ah hadal ka jeediyay isagoo ku magacaaban madaxa ardayda Soomaaliyeed ee Kolombas Ohaayo. Horay ulama socon Maxamuud waxa uu qabto iyo meeshi uu ku danbeeyay sidaas awgeed way i yaab galisay in ninkaas Maxamuud yahay. Nin reer Wajeer ah oo ila socday ayaan ku iri “ninkaan aad u jeeddo toban sano ka hor ayuu baadiye ka yimid”. Waxaa uu iigu jawaabay hoggaamintu waa u dhalasho.
Hadalkaas ayaa igu dhaliyay in dib u milicsado sanadihii aan Maxamuud Nayroobi wada joognay. waxaa isoo baxday inuu markaasba masuul ahaa ee aanan ku baraarugsnayn. Waxaan xasuustay waqtigii anigu aan wax shaqo ah aan ka qaban jiray daawashada filimaanta hindiga ah iyo ka sheekayntooda inuu isagu ku mashquulsanaa hagaajinta nolosha qoyskooda oo markaas miyi ku noolaa itiisa badan. waxaa uu ku howlanaa sidii qaar walaalihii miyiga loo keeni lahaa, isku xirka qoyska inti dibada joogtay iyo kuwa miyiga joogay iyo u ordidda horumarinta deegaanki uu kasoo jeeday. ogow da’ ahaan maanan kala fogayne.
Marki uu wax helay Maxamuud isma badlin mana noqon mid illaawo asxaabta, qaraabada iyo dhalinta bayhoofka ah. Waxaa uu ii sheegay Yaxye Aden Shire inuu marar badan oo uu aad oogu baahnaa kaalmo si lama filaan ah Maxamuud ooga fujiyay. Waxaa uu yiri Yaxye “Sebtember 2011-ki ayuu isoo wacay innagoo muddo is moogayn. Maalinta uu isoo wacayo waxaan ahaa shaqo la’aan waxaa umul ii ahayd xaaska oo ii curatay. waxay iga maraysay meel adag. Wuxuu igu yiri $250 ka qaato xawilaadda, Manderana tag oo howl yar iiga soo qabo. Qalbiga ayaan iska iri Riximka ayaa soo diray.” Yaxye waxaa u yiri mar kale “Maxamuud waxaad moodaa inuu ogyahay maalinta aan kaalmo u baahanahay. Mar kale ayuu isoo wacay sanadki 2013-ki anigoo si gardarro ah shaqo aan hayay la iiga cayriyay. inaan shaqada waayay waxaa iiga darnaa si xun ayaa ugu foorjoobay oo ciil iyo caro ayaan la seexan waayay. Maxamuud marki uu isoo wacay waxaa uu yiri shaqo noocaas ah ayaan ku hayaa ee aad. Waxaan is iri tolow ayaa ogaysiiyo maalinta aad shaqo la’aan noqoto”.
Waxaan xasuustaa markaan xasuusto deeqdi Maxamuud hadalki Immaamu Ibnu Hishaam Al-zuhri. Ibnu Hishaam waxaa u hormaray faqri dhago-tire ah oo dadku ku sheekaysan jiray. waa danbe ayaa Eebe u kala furay. wuxuu billaabay in wixii Eebe siiyay uu bixiyo si xisaab la’aan ah. waxaa lagu yiri Zuhriyow gaajada darraad meel dheer ma jirtee maad meel wax dhigatid. waxaa uu ku jawaabay deeqsigu ma cabsi galiyaan tijaabooyinka nolosha. Macnaha qofki deeqsinimo u dhashay shalaybaad dhib soo martay bakhayl uma noqdo.
Gar ayaa igu go’day meel aan hadalkaas u dhaafana waan waayay. Waxaan ku iri waad iga saxantahay ee ilaahay ha ku garab galo. waxaanse kula dardaarmay inuusan dadaalku la galin inuu Itoobiya hoos fadhiisto waayahay ayuuna igu yiri. Intaan ogahay ma uusan galin howshi ayada ahayd waxaana filayaa sababta uu uga baaqsaday inay tahay in ay howshi Itoobiya dhaafi wayday, intuu iyada hoos tagi lahaana uu ka door biday inuu dib u dhigo qorshihhisi.
Sidoo kale, waqti aan dadaal ugu jirnay hirgalinta iskoolka sare ee Amiir-Nuur waxaa uu ahaa shaqsigi aan la hadli jirnay si aan kaalmo ooga helno ururkaas oo ugu danbayn noogu deeqay labo kun oo doolar. Sanadki 2009-di waxaa oo usoo wareegay Soomaaliya oo uu go’aansaday inuu waqtigiisi iyo xirfadiisa dalkeenna ku hormariyo. Waxaa uu aasaasay hayada ADR oo qayb weyn ka qaadatay horumarinta gobalka Gedo gaar ahaan Ceelcadde iyo agagaarkiisa. Waxaa uu kaalin weyn oo muuqato lana qirsanyahay ku leeyahay waxbarashada gobalka Gedo gaar ahaan midda Ceelcadde oo uu ka mid yahay bud-dhigayaasha qayabaha kala duwan ee waxbarashada dagmada.
Sanadki 2013ki waxaa uu la taliye ka noqday wasaaradda waxbarashada ee Soomaliya waxaa uuna qayb weyn ka qaatay barnaamijki “Go TO School” ee ay UNICEF maalgalisay kaaso in ka badan hal milyan oo caruur soomaaliyeed ah u ogaaladay waxabarasho bilaash ah. Ka dib waxaa uu noqday guddimiyihii gudiga wacyi galinta bulshada ee Jubbaland marki loo diyaar garoobayay soo xulidda baarlamaanka faderaalka. Waxaa maray inta badan dagmooyinka Gedo waxaana uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada si uu u ogaado mowqifkooda iyo aragtodooda ku aadan soo xulidda ergooyinka.